Sat, Jul 11, 2020 at 1:19pm
काठमाडौं, १६ साउन । नेपाल भारत जोड्ने रक्सौल- काठमाडौं रेलमार्गका लागि ४ वटा एलाईन्टमेन्ट सहितको सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदन भारतीय कम्पनीले नेपाललाई दिएको छ । काठमाडौं तराई/मधेश द्रुतमार्गको लम्वाई करिव ७४ किमी छ । भारतीय कोंकर्ण रेल्वे कर्पोरेशनले १ सय ४० देखि २ सय किमीसम्मको एलाईन्टमेन्ट सहितको प्रतिवेदन दिएको हो। निजगढबाट पथलैया १८ किमी पर्छ । त्यहाँबाट घण्टाघर २५ किमीमा पर्छ । घण्टारघरदेखि ३० किमीमा..
एक वर्षभित्रमा कर्णाली प्रदेश जोड्ने सडक कालोपत्र हुने
सल्यान, १५ साउन कर्णाली प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री प्रकाश ज्वालाले एक वर्षभित्रमा कर्णाली प्रदेश जोड्ने सडक कालोपत्र हुने दाबी गर्नुभएको छ । श्रीनगर खलङ्गा हँुदै बालुवा सङ्ग्रहीसम्मको करीब ३८ किलोमिटर सडक चालु आर्थिक वर्षभित्रमा कालोपत्र हुने उहाँले बताउनुभएको हो । शारदा नगरपालिका–४ लामाडाँडामा स्थापना भएको शहीद नेत्रलाल अभागी प्रतिष्ठानको दुई कोठे भवनको आज शिलान्यास गर्दैै मन्त्री ज्वालाले राजधानी जोड्का लागि रु नौ..
काठमाडौँ, १५ साउन यातायात व्यवस्था कार्यालयले मादक पदार्थ सेवन (मापसे) गरी सवारी साधन चलाउने ४३९ चालकको अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) निलम्बन गरेको छ । उक्त कार्यालयले महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाको सिफारिसमा पाँच पटकभन्दा बढी मापसे कारवाहीमा परेका व्यक्तिको लाइसेन्स निलम्बन गरेको हो । विसं २०६८ मङ्सिर १७ देखि मापसे जाँचलाई कडाइ गर्दै आएको महाशाखाले हालसम्म उपत्यकामा मापसे सेवन गरेर सवारी साधान चलाउने एक..
काठमाडौँ, १५ साउन । लामो प्रयासपछि पुनः सञ्चालनमा आएको तातोपानी नाका भूकम्पअघिको अवस्थामा फर्कन सकेको छैन । चार वर्षदेखि बन्द नाका खुले पनि मानिस आउजाउ गर्न नपाएका कारण चहलपहल शून्य छ । मालबाहक गाडी मात्र आउजाउ गर्न पाउने सहमतिपछि चीनले नाका खुलाएको थियो । नेपाल–चीन जोड्ने प्रमुख नाका प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन हुन मानिस पनि सहज रूपमा आउजाउ हुनुपर्ने माग स्थानीयको छ ।..
काठमाडौँ, १४ साउन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले जनकपुर उपमहानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अर्जुनप्रसाद सुवेदीसहित छ जनाविरुद्ध आज विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०७४÷७५ मा विद्युतीय सामग्री खरीद गर्दा अनियमितता गरेको भन्ने उजुरीका आधारमा छानबिन गर्दा बदमासी गरेको पाइएको आयोगले जनाएको छ । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सुवेदीलगायतले सत्या इन्टरप्राइजेजसँग मिलेमतो गरी विद्युतीय सामग्रीको खरीद गरेको पाइएको छ । आयोगले उपसचिव..
काठमाडौँ, १४ साउन ४ वर्ष अघि विस्तारको काम शुरु भएको त्रिपुरेश्वर–नागढुङ्गा सडक चार महीनामा सम्पन्न हुने भएको छ । सडक क्षेत्रमा परेका घर भत्काएपछि स्थानीयवासीले विरोध गरेपछि लामो समयसम्म सडक निर्माण अवरुद्ध भएको थियो । अहिलेको गतिमा काम भए निर्माण सम्पन्न हुन लामो समय नलाग्ने काठमाडौँ उपत्यका सडक विस्तार आयोजनाले जनाएको छ । “सडकको झण्डै ८० प्रतिशत काम सम्पन्न भएको छ”, आयोजनाका..
मेची-महाकाली विद्युतीय रेलमार्गको काम अगाडि बढ्यो, मुआब्जा निर्धारण प्रक्रिया सुरु
काठमाडौं, १४ साउन । राष्ट्रिय गौरवको मेची-महाकाली विदयुतीय रेलमार्गको रेखाङ्कनमा पर्ने क्षेत्रहरुको मुआब्जा निर्धारण प्रक्रिया सुरु भएको छ । बर्दिवास-निजगढ खण्डबाट मुआब्जा निर्धारण प्रक्रिया सुरु गरिएको हो । रौतहट जिल्लाको साविकका सतंपुर र रगंपुर गाविसमा रेलमार्गको रेखाङकनभित्र पर्ने जग्गाको मुआब्जा निर्धारण गरेको छ । सम्वन्धित जग्गाधनी वा मोही वा निजको ऐन अनुसार अधिकार प्राप्त वारेसले जग्गाधनी प्रमाणपत्र, मालपोत तिरेको रसिद, कित्ता नं स्पष्ट..
सुकेटार विमानस्थलमा डेढ महीनादेखि उडान ठप्प
ताप्लेजुङ, १३ साउन सुकेटार विमानस्थलमा असारदेखि उडान हुनसकेको छैन । हरेक वर्ष बर्खामा उडान ठप्प हुँदैआएको सुकेटार विमानस्थलमा यस वर्ष असार ४ गतेदेखि मौसम खराबीका कारण उडान हुन सकेको छैन । मौसम खराब भएकाले उडान हुन नसकेको नेपाल वायुसेवा निगमका स्टेशन इञ्चार्ज राजु कार्कीले बताउनुभयो । जेठ २९ गतेसम्म नियमित उडान भएकामा त्यसयता असार ४ गते मात्रै उडान भएको थियो । असार..
सवारी साधनको अधिकतम खुद्रा मूल्य भन्सारमै सार्वजनिक गर्नुपर्ने
काठमाडौँ, १३ साउन आयातकर्ताले आयात गर्ने १२ किसिमका वस्तुको एमआरपी भन्सार बिन्दुमै घोषणा गर्नुपर्ने भएको छ। भन्सार विभागका अनुसार ती वस्तु आयात गर्नेले भन्सार बिन्दुमा एमआरपी घोषणा नगरे सामान आयात गर्न नपाउने भएका छन्। विभागले प्रकाशन गरेको सूचनाअनुसार सबै प्रकारका टेलिभिजन सेट, घरायसी प्रयोजनमा प्रयोग हुने एयर कन्डिसन, घरायसी प्रयोजनमा प्रयोग हुने रेफ्रिजेरेटर र वासिङ मेसिनको अधिकतम खुद्रा मूल्य भन्सार विन्दूमा नै..
काठमार्डौँ, १२ साउन लामो दूरीका गन्तव्यमा उडान भरी व्यावसायिक फड्को मार्ने उद्देश्यसहित नेपाल वायुसेवा निगम (नेपाल एयरलाइन्स) ले अघिल्लो वर्ष दुई नयाँ वाइडबडी विमान भित्र्यायो । कर्मचारी सञ्चय कोष र नागरिक लगानीकोषको ऋणमार्फत करीब रु २४ अर्बमा खरीद गरिएका विमान गन्तव्य नपाएर थन्किरहेका बेला निगम व्यवस्थापन भने गन्तव्य सेवा विस्तारको धमाधम तयारीमा छ । त्यसो त, निगमभित्रको बेथिति, आर्थिक अराजकता, संस्थाभित्रको विकृतिलगायत विषय..
कर्णाली राजमार्गमा पहिरो जाँदा यातायात ठप्प, हवाई यात्राको भर पर्नुपर्ने अवस्था
खलङ्गा, १२ साउन कर्णाली राजमार्गमा पहिरो जाँदा यातायात सेवा ठप्प भएको छ । कालीकोट खण्डको कालेखोला नजिकै आज बिहान पहिरो जाँदा सडक नै भासिएकाले छिटो खुलाउन नसकिने प्रमुख जिल्ला अधिकारी चन्द्रबहादुर कार्कीले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार ४० मिटर लामो सडकमा पहिरो गएको छ । “यसअघि सानातिना दर्जनभन्दा बढी पहिरो जाँदा समयमै खुलाउन सकिएको थियो”, प्रजिअ कार्कीले भन्नुभयो, “ पहिरोको प्रकृति हेर्दा तुरुन्तै..
पहिरोले कर्णाली राजमार्ग अवरुद्ध, यात्रु बीच बाटोमा अलपत्र
कालीकोट, १२ साउन । कर्णाली राजमार्गको शुभकालिका गाउँपालिका–१ मा पर्ने कालेखोलामा पहिरो जाँदा यातायातका साधन अवरुद्ध भएको छ । शनिबार राति गएको पहिरोले राजमार्ग अवरुद्ध भएको हो । अहिले खुलाउने प्रयास जारी रहेको सडक डिभिजन कार्यालय जुम्लाले जनाएको छ । राजमार्ग अवरुद्ध हुँदा जुम्ला र कालीकोटबाट सुर्खेत, नेपालगञ्जका लागि छुटेका यात्रुबाहक सवारीसाधन तथा यात्रुहरु बीच बाटो नै अलपत्र परेका छन् । ..
ट्रकको पछाडि बस ठोक्किँदा १ को मृत्यु, ५ घाइते
चितवन, १२ साउन । इच्छाकामना गाउँपालिका–४ फिस्लिङस्थित पृथ्वी राजमार्गमा आईतबार बिहान ट्रकको पछाडि बस ठक्कर खाँदा बसमा सवार एक जनाको मृत्यु भएको छ भने पाँच घाइते भएका छन् । जिल्ला प्रहरी कार्यालय चितवनले दिएको जानकारीअनुसार मृत्यु हुनेमा झापाको मेची–२ बस्ने २३ वर्षीय भानु तिमिल्सिना रहेका छन् । उपचारका लागि भरतपुरतर्फ ल्याउँदै गर्दा उनको बाटोमै मृत्यु भएको हो । गौरबाट भैँसी लिएर काठमाडौँतर्फ जाँदै..
विजयपुरमा बेलिब्रिजबाट यातायात सञ्चालन
कास्की, ११ साउन पर्यटकीय शहर पोखरा प्रवेशको मुख्यद्वार विजयपुर खोलामाथि बेलिब्रिज (पुल) सञ्चालनमा ल्याइएको छ । विजयपुर खोलामाथि एक दशकअघि निर्माण गरिएको पक्की मोटरेवल पुलको स्टिल बिम चर्किदा ठूला भार क्षमताका यातायातका साधन पुलबाट आवतजावत रोक लगाइएकामा आज साँझबाट बेलिब्रिज सञ्चालनमा ल्याएर यातायात वारपार शुरु गरिएको डिभिजन सडक कार्यालय पोखराका प्रमुख हरिप्रसाद पोखरेलले जानकारी दिनुभयो । गत फागुनमा पक्की पुल जीर्ण भएको..
यती एयरलाइन्सको पाँचौँ एटीआर विमान भित्रियो
काठमाडौँ, ११ साउन निजी क्षेत्रको अग्रणी वायु सेवा प्रदायक कम्पनी यती एयरलाइन्सले आफ्नो सेवा विस्तारका क्रममा पाँचौँ ‘एटीआर–७२–५००’ विमान भित्र्याएको छ । कलसाइन नाइन एन एएनजी विमान थाइल्याण्डको राजधानी बैंककबाट उडेर आज दिउँसो त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा अवतरण गरेको थियो । व्यावसायिकतासँगै सरकारले घोषणा गरेको नेपाल भ्रमण वर्षलाई सहयोग पु¥याउने लक्ष्यका साथ यतीले विमान थपेको हो । उक्त लक्ष्य हासिल गर्न थपिएका विमानले सहयोग..
पहिराेले अवरुद्ध कर्णाली राजमार्ग खुल्याे
कालिकोट, ११ साउन । कर्णाली राजमार्गमा गएराति पहिरो खस्दा अवरुद्ध भएकाे कर्नाली राजमार्ग खुला भएकाे छ । कालिकाेटकाे शुभकालिका गाउँपालिका-१ स्थित कर्णाली राजमार्गमा गएराति पहिरो खस्दा अवरुद्ध कर्णाली राजमार्ग खुला भएको हाे। हुल्मा प्रहरी चौकी इन्चार्ज मिनबहादुर बमका अनुसार वर्षाका कारण गगनेमा गएराति पहिरो खस्दा अवरुद्ध भएको राजमार्ग दिउँसोबाट खुलेको हो। गगनेमा दैनिक रुपमा पहिरो खस्दा राजमार्ग अवरुद्ध हुने गरेको छ। आज पनि..
३० प्रतिशत वायु प्रदूषण मापदण्ड विपरीतका साधनबाट
काठमाडौँ, १० साउन । काठमाडौँ उपत्यकामा ३१ प्रतिशत प्रदूषण मापदण्ड विपरीत सवारीसाधनबाट हुने गरेको पाइएको छ । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले आज ललितपुरमा आयोजना गरेको ‘वातावरण प्रदूषण र मानवअधिकार एक अध्ययन प्रतिवदेन सार्वजनिक तथा वातावरण विधेयक–२०७५’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा उपत्यकामा सवारीसाधनले अत्यधिक चाप हुनाका साथै मापदण्ड विपरीतका सवारीसाधनले ३१ प्रतिशत प्रदूषण हुने गरेको पाइएको हो । प्रतिवेदनको आयोगका कार्यवाहक अध्यक्ष प्रकाश वस्तीले सार्वजनिक..
जनकपुर विमानस्थलमा पनि हवाई डिपो संचालन, अब काठमाडौं धाउन नपर्ने
काठमाडौं, १० साउन । इन्धन भर्न जहाज तथा हेलिकप्टर काठमाडौंमै आउनुपर्ने बाध्यता हटेको छ । नेपाल आयल निगमले जनकपुरमा हवाई इन्धन भर्न रिफ्युलिङ संचालनमा ल्याएको छ । विमानस्थलबाट रात्रीकालिन सेवालाई लक्षित गर्दै रिफ्युलिङ सेवा सुरु गरेको हो । यो विमानस्थलमा १६ हजार लिटर क्षमताको रिफ्युलिङ मेसिन राखिएको छ । सेवा सुरु भएपछि प्रदेश नम्बर २ मा रात्रीकालिन सेवा सुरु गर्न जहाजलाई बाटो खुलेको छ..
बस र ट्रक ठोक्किँदा १५ घाइते, ट्रक चालक फरार
मुग्लिन, १० साउन । चितवनमा सवारी दुर्घटना हुँदा १५ जना घाइते भएका छन् । वीरगञ्जबाट धादिङ जाँदै गरेको ना८ख ६०५८ नंको यात्रुबाहक बस र काठमाडौँबाट नारायणगढतर्फ जाँदै गरेको ना६ख २८९५ नंको मालबाहक ट्रक शुक्रबार बिहान ८ः४० बजे पृथ्वीराजमार्गअन्तर्गत चितवनको इच्छाकामना– ४ लेवाटारमा एकआपसमा ठोक्किएर दुर्घटना भएको इलाका प्रहरी कार्यालय मुग्लिनले जनाएको छ । घाइतेको उपचारका लागि भरतपुर लगिएको छ । दुर्घटनापछि अवरुद्ध भएको..
राम-राम यो हिलो ! यात्रा निकै जोखिमपूर्ण
पर्वत, ९ साउन यहाँका दुई लोकमार्गमा वर्षायाम शुरु भएदेखि नै हिलो र पहिरोको सास्ती बढेको छ । मध्यपहाडी (पुष्पलाल) लोकमार्ग धवलागिरिवासीको ‘लाइफलाइन’ सडक हो तर यतिबेला यही सडक धवलागिरिका चार जिल्लावासीका लागि धराप बनेको छ । त्यस्तै अर्को राष्ट्रिय गौरवको योजना कालीगण्डकी लोकमार्गमा पनि उस्तै अवस्था छ । गत १४ महीनायता पर्वतको मालढुङ्गादेखि कास्कीको विन्ध्यवासिनीसम्मको करीब ६५ किलोमिटर दूरीको यो सडक स्तरोन्नतिको..
पहिराेले २ सातादेखि अवरुद्ध सडक अझैँ खुलेन
पाल्पा, ८ साउन । वर्षाका कारण पाल्पाको रम्भा गाउँपालिका–२ फोक्सिङकोटमा जोखिम बढेको छ । विभिन्न स्थानमा खसेको पहिरोले घरगोठ बगाउने तथा पुरिने खतरा बढेको छ । मोटरबाटो चौडा गर्न डोजर लगाएपछि फोक्सिङकोटको रानीवासको लम्भार क्षेत्रमा पहिरो गएको छ । वर्षाले बस्तीदेखि तल रहेको बारीमा पहिरो गएपछि जोखिम बढेको वडासचिव धनकुमारी सारुले बताइन् । “गाउँमा पहिरोको जोखिम बढेको छ, डर र त्रासका साथ..
स्थानीयवासीको अवरोधका कारण लमही–कोइलावास सडक निर्माण प्रभावित
घोराही, ७ साउन स्थानीयवासीको अवरोधका कारण लमही–कोइलावास सडक निर्माण प्रभावित भएको छ । लमही–४ सेम्रहवाका बासिन्दाले उचित मुआब्जा उपलब्ध गराउनुपर्ने भन्दै अवरोध गरेका हुन् । सरकारले सो ठाउँमा प्रतिवर्गमिटर रु ५० मुुआब्जा निर्धारण गरेको छ । मुआब्जामा चित्त नबुझिएपछि स्थानीयवासीले सडक निर्माण रोकेका छन् । जग्गा मासिएपछि लमही–४ का देशुराम चौधरी आफू निकै मर्कामा परेको बताउनुहुन्छ । “मुआब्जा न्यून भयो, सरकारले उचित..
रिभोल्ट इन्टेलिकर्पको आरभी ४०० मोटरसाइकल छिट्टै बजारमा आउँदै, मूल्य मात्र १ लाख आइसी
काठमाडाैं, ७ साउन । रिभोल्ट इन्टेलिकर्पको आरभी ४०० मोटरसाइकल बजारमा आउने । अगस्टदेखि रिभोल्ट इन्टेलिकर्पकोआरभी ४०० भारतिय बजारमा आउने हुने भएकाे हाे । केही दिनपहिले सो बाइक सार्वजनिक गरिएको थियो। यो मोटरसाइकल रिभोल्टको आरभी ४०० इलेक्ट्रिक मोटरसाइकल अरु इलेक्ट्रिक मोटरसाइकलभन्दा फरक रहेको कम्पनीले बताएको छ। यो एकपटकमा फुलचार्ज गर्दा १ सय ५६ किलोमिटरसम्म चलाउन सकिने बताइएको छ। यसको प्रि–बुकिङ जुन २५ देखि सुरु गरिएको छ।..
जोरपाटी–गोकर्ण–सुन्दरीजल सडक मर्मतसम्भार गरिने
काठमाडौँ, ७ साउन जोरपाटी–गोकर्ण–सुन्दरीजल सडक तत्काल मर्मतसम्भार गरी सहजरुपमा यातायात सञ्चालन गराएर कालोपत्र गर्ने काम अघि बढाउन जनप्रतिनिधि सहमत भएका छन् । गत भदौमै कालोपत्र भइसक्नुपर्ने गरी ठेक्का भएको सडक थपिएको म्याद सकिन लाग्दासमेत काम शुरु हुन सकेको छैन । गत वर्ष सकिएर थपिएको म्याद पनि आगामी भदौमा सकिँदैछ तर सडक सार्वजनिक जग्गा भएको स्थानमा मात्र विस्तार गर्न लागेजस्तो देखिन्छ । जीर्ण..
काठमाडौं-ओसाका उडानका लागि धमाधम टिकट बुकिङ
काठमाडौँ, ६ साउन । तोकिएको शर्त पुरा गर्न नसकेको भन्दै नेपाल वायुसेवा निगमले देवमान हिराचनलाई जापान प्रतिनीधीबाट हटाएपछि उनको ठाउँमा जापानको एआइजे (एभिएशन इन्टरनेश्नल जापान) कम्पनीलाई नियुक्त गरिएको छ । निगमका अनुसार 'जापानमा सहजै निगमको कर्मचारी परिचालन गर्नका लागि प्रतिनिधी नियुक्त गर्ने गरिन्छ । जसले गर्दा यताबाट गएका निगमका कर्मचारीहरुलाई भिसाको समस्या हुँदैन । उनीहरुले आधिकारीक रुपमा जापानमा बसेर काम गर्ने वातावरण..
सडक दुर्घटनामा २८ भारतीय तीर्थयात्री घाइते, चालक फरार
बर्दिवास, ६ साउन जिल्लाको बर्दिवास नगरपालिका–५ टुटेश्वरस्थित श्रीटुटेश्वरनाथ महादेवको दर्शन गरेर फर्कँदै गरेका २८ भारतीय भक्तजन सडक दुर्घटनामा घाइते भएका छन् । साउने सोमबारे मेलाको अवसरमा मन्दिरको दर्शन गरेर फर्कने क्रममा उनीहरू महोत्तरीमा सडक दुर्घटनामा घाइते भएका हुन् । टुटेश्वर मन्दिरबाट बर्दिवास आउने क्रममा पूर्व–पश्चिम राजमार्गको वनक्षेत्रमा भारतीय यात्रु चढेको ना ४ च १०९९ नं को पिकअप भ्यान आज सोमबार दिउँसो पल्टेको..
काठमाडौँ, ६ साउन जीर्ण सडकमा ग्राभेल भन्दै माटो हालेर खेत रोप्ने गह्रा जस्तो बनाइएको भनी स्थानीयवासीले जोरपाटी–गोकर्ण–सुन्दरीजल सडक अवरुद्ध गरेका छन् । सडक विस्तार गरी कालोपत्रका लागि बोलपत्र गरेको चार वर्ष बित्दा समेत काम शुरु नगरी माटो हालेर थप समस्या ल्याउन खोजिएको स्थानीयवासीको आरोप छ । माटो हालेपछि सडक थप जीर्ण हुनुका साथै यात्रुको सुरक्षामा समेत गम्भीर प्रभाव पर्ने गरेको स्थानीयवासी नन्दलाल..
Results 1271: You are at page 12 of 43